ပုံမှန်နေထိုင်မှုထက် ကျော်လွန်၍……… – PoemsCorner
ပြက္ခဒိန်ရဲ့ရက်စွဲတွေမှာ တို့ ရဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေ မဟောင်းသေးပါဘူး
နေ့ ရက်တွေ ကြားထဲမှာ အိမ်မက်တွေကူးသန်းခဲ့ ကြတယ် စိတ်ချင်းဖလှယ်လို့ 
ဒါတွေဟာ အိမ်မက်မဟုတ်တဲ့ အိမ်မက်တွေလား နားလည်မှု သံယောဇဉ် အရာမယွင်းအောင် ချစ်ခဲ့သူပါ အမှောင်ညမှာ ကြယ်၊လ မရှိလည်းမင်းကို လွမ်းနေခဲ့သူပါ ..။
မျက်ဝန်းနက်နက် အပြုးချိုချိုလေးမှာ ဟုတ် ဆိုတဲ့ စကားတလုံးလေးလောက်နဲ့ တင် အလွမ်းသင့်ခဲ့သူလား………. နှစ်ယောက်လုံးခံစားဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့သူပါတကယ်ဆို မစားသုံးသင့်တဲ့ အသီးကိုမှ ချိုမြိုင်စွာ တို့ နှစ်ဦး စားသုံးခဲ့တယ်နော်
အခုတော့ အဆိတ်သင့် သူလို အလွမ်းဆိုတာကို ထမ်းပိုးလို့နေ့ ရက်တွေက ၀ါးမြို့ နေလေရဲ့ 
တဦးကို တဦး နားလည်လို့တို့ အတွက် နေ့ သစ်တနေ့ ရဲ့ တွေ့ ဆုံမှုကို အားပေးသံချင်းထပ်ခဲ့ ကြ
ကွာခြားမှုထက် ဝေးကွာမှုကိုမနှစ်မြို့ စွာ အလွမ်းတွေ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတယ် ကံတရားကို အပြစ်ဖွဲ့ လို့တွေဆုံမှုကို တမ်းတရင်း မနေ့ က ကျန်ခဲ့ တဲ့ အလွမ်းဟာ ဒီနေ့ ကို သယ်ဆောင်လို့လေထဲက အသံကိုကြားချင်နေလေရဲ့့……………………………..
In: ကဗျာ Posted By: nyihtwe Date: Dec 6, 2010
နေ့ တနေ့ ၇ဲ့မျှော်လင့်ချက်
Leave comment3Comments & 795 views
တွေဆုံမှုကို တမ်းတရင်း မနေ့ က ကျန်ခဲ့ တဲ့ အလွမ်းဟာ ဒီနေ့ ကို သယ်ဆောင်လို့လေထဲက အသံကိုကြားချင်နေလေရဲ့့……………………………..
By: moehtetaung18 at Dec 7, 2010
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်ကိုလည်း အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
By: လူသစ် at Dec 7, 2010
# ပက္ခဒိန်ရဲ့ရက်စွဲတွေမှာ တို့ ရဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေ မဟောင်းသေးပါဘူး
# နေ့ ရက်တွေ ကြားထဲမှာ အိမ်မက်တွေကူးသန်းခဲ့ ကြတယ် စိတ်ချင်းဖလှယ်လို့ 
# ဒါတွေဟာ အိမ်မက်မဟုတ်တဲ့ အိမ်မက်တွေလား နားလည်မှု သံယောဇဉ် အရာမယွင်းအောင် ချစ်ခဲ့သူပါ အမှောင်ညမှာ ကြယ်၊လ မရှိလည်းမင်းကို လွမ်းနေခဲ့သူပါ ..။